Zviitire wega Swag Akaunti | Martech Zone
China, Kukadzi 23, 2012 Muvhuro, March 5, 2012 Douglas Karr
Tinoda svg. Our inbound yekushambadzira agency akaraira swag yedu yekutanga gore rapfuura - a yakanaka notibhuku diki revapindi vemusangano. Gore rino takatenga mamwe inotonhorera 2Gb USB inotyaira izvo zvakafanana chimiro uye saizi yekiyi kuti iwe ugone kuzviisa pane yako keychain. Kana iwe wakamira nehofisi yedu, iwe ungangodaro wakagamuchira imwe!
Chii chinonzi swag? Chakapambwa, chakapambwa, chakapambwa, chakapambwa… hupfumi hwaunowana kubva kumakambani nekudzoka kwekushanyira dumba ravo, kuvabatsira online, kana kungova shamwari nemunhu ane makiyi eiyo swag locker. Kudzoka mune dot com heyday, ndinorangarira ndichibuda kunze kwemusangano neine swag yakawanda kupfuura yandaigona kutakura, yaisanganisira yaive isina waya keyboard uye mbeva kubva kuMicrosoft!
Swag iri kuita zvine musoro mazuva ano uye bhizinesi rakarikomberedza rinoramba richichinja. Vhiki rino ndanga ndichitaura zvakawanda kuchikwata chiri WPEngine (Muvambi Jason Cohen ari pane yedu redhiyo show muenzi Chishanu) saka ndakawana mhinduro inotonhorera kumashure kune zano randakavapa. Ndakagamuchira chinongedzo ku SwagLove kuti utore chigadzirwa uye chiunze chakananga kwandiri!
Heano mashandiro eSwagLove anoshanda
Saina mahara, sarudza chako chekusimudzira chipo zvinhu, kurodha uye kuisa yako tsika mifananidzo.
Tora zvinongedzo zvako uye uzvitumire kune vanhu vaunoda kubata kumeso
Vagashiri vanotevera chinongedzo kune rako rine zita rekumhara peji kwavanopinda saizi yavo nekero yekutumira
Isu tinotarisira kudhinda, kutumira, tsika uye kushandira vatengi, kana paine chero hiccups (senge 'oops, ini ndaraira saizi isiriyo!')
Iwe unongobhadhara chete zvakadzikinurwa kupa saka iwe usatombotambisa t-shati kana peni
Zvakanaka sei izvozvo? Panzvimbo pekutenga bhokisi reSwag raunogona kupererwa kana kusakwanisa kupa, ikozvino unogona chete kubhadhara yako SwagLove account uye kubhadhara sezvaunoenda! Uye mutengi wako anowana kusarudza iyo Swag yavanoda! Kwakanakisa!
Tags: kuvimbika kwemutengimutengi mibayirosvgswag accountswaglove
Usapomera CMS, Pomera iwo Musiki Dhizaina
Kutenda nekudanidzira-kunze! Ndiri kufara kuti unofarira basa redu. Iko kusimuka kwakanaka kwazvo kubva munzira dzetsika yezvigadzirwa zvekushambadzira indasitiri, asi makambani ewebhu anoita kunge ari kuzvigamuchira.
Tiri kutanga kuona mamwe matsva ekushambadzira ekutengesa mishandirapamwe. Mamwe makambani senge WPEngine ari kupa yakasununguka swag kune vatengi vatsva sechikamu chekunyoresa. Vamwe vari kushandisa swag sechikamu chemishandirapamwe yekutenga vatengi. Saka semuenzaniso, "kana iwe ukasaina muyedzo yemahara tinokupa ino shati inotonhorera sechipo chemahara". Ivo chaivo vane hunyanzvi vari kuitora zvakatowanda uye vachishandisa yekudzokorodza mishandirapamwe iine izvo zvekutengesa kukurudzira vanhu kuti vadzokere kune ino saiti uye kusaina. Denga ndiwo muganho chaizvo. Uku kungori kutanga. Kune nzira dzekuvandudza dzega dzega mushambadzi we tech kushandisa zvigadzirwa zvemuviri (swag) mukushambadzira kwavo. Uye sezvo vazhinji vatengesi vepamhepo nemakambani einternet vasina kana kumbotumira chero chinhu kune vatengi vavo, chinhu chinogamuchirwa kushamisika kuwana chimwe chinhu chemuviri kubva kune chaiyo kambani. Iyo inonyatso siya murangariro usingagumi.
Kana iwe kana vaverengi vako muine chero mibvunzo kana muchida kufunga nezvekutengesa zvekutengesa neni, ndinogona kufara kubatsira chero ini ndichigona!